जुम्ला नेपाली भाषामा - Joomla in Nepali Language!
मुख्य पथमा पुग्नुहोस्
पहिलो कोलममा पुग्नुहोस्
दोस्रो कोलममा पुग्नुहोस्
Joomla Localization in Nepali
रचना प्रकाशन गराउनुहोस्
बृहत नेपाली जुम्ला वेभसाईटमा तपाईले आफ्नो लेख रचना तथा वेभिलंक प्रकाशन गराउन सक्नुहुन्छ। यसको लागी तपाई पहिले यस वेभसाईटको सदस्य हुनुपर्छ। परिक्षण प्रयोजनको निमित्त तपाईले तल दिइएको प्रयोगकर्ताको विवरणले लगइन गर्न पनि सक्नुहुन्छ।
जुम्ला अब हाम्रो भाषा नेपालीमै
विषयवस्तु व्यवस्थापन प्रणाली सीएमएस हरुको संसारमा जुम्ला निकै लोकप्रीय नाम हो । यसले हामीलाई अत्यन्त सजिलोसँग आकर्षक वेभसाइट तथा अनलाइन कार्यक्रमहरु बनाउन मद्दत पुर्याउँछ। रमाइलो कुरा त यो खुलास्रोत ओपन सोस्र सफ्टवेयर हुनाले हामी यसलाई निःशुल्क प्रयोग गर्न सक्दछौं ।
अब यो प्रणाली पहिलो पटक नेपाली भाषामा पनि उपलब्ध छ । अहिलेसम्म यो प्रणाली कुनै पनि दक्षिण एशियाली भाषामा उपलब्ध हुन नसकेको बेलामा पहिलो पटक नेपाली भाषामा उपलब्ध हुनुलाई सुखद् मान्नु पर्दछ । यस बहुउपयोगी प्रणालीलाई प्लानेट अर्थ सोलुसन्स ले विकास गरेको हो । बहुभाषी सफ्टवेयरको विकासमा सकि्रय यस संस्थाद्वारा विकसित यो प्रणालीले नेपाली भाषा तथा खुलास्रोत आन्दोलनमा ठूलो टेवा पुर्याउन सक्ने देखिन्छ ।
लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा (जन्म बिसं १९६६ (सन् १९०९), मृत्यु बिसं २०१६ (सन् १९५९)) नेपाली साहित्यका महाकवि हुन्। देवकोटा नेपाली साहित्यका बिभिन्न विधामा कलम चलाउने बहुमुखी प्रतिभाका धनी थिए। उनलेकविता र निबन्ध विधामा गरेका योगदानहरू उच्च कोटिको मानिन्छ। उनले मुनामदन, सुलोचना, शाकुन्तलजस्ता अमर कृतिहरू लेखेका थिए। बिशेष गरी मुनामदन कृतिका लागि उनी सबैभन्दा प्रख्यात छन्।
पछि उनले नेपाली साहित्यमा रुमानी (स्वच्छन्दतावाद) को सुरुवात गरि नयाँपुस्ताका लेखकहरूलाई निक्कै प्रभाव पारे। उनी एक आधुनिक कविका रुपमा बिकास हुँदै नेपाली साहित्यमा आफ्नो उच्च ओहदा कायम गरे, जसलाई धेरैजनाहरू नक्कल गर्न खोज्दछन्।
उनले सहनशीलता, सहयोगी भावना र दयाको उपदेश दिन्थे । कामबाट घर फर्किदै गर्दा, एक दिन, उनका सामुन्ने एक माग्ने पैसा माग्दै आयो। जाडोले कठ्याङ्ग्रिएको देखेर देवकोटाले आफैँले लाइराखेको कोट फुकालेर त्यस माग्नेलाई दिए।
देवकोटा सन १९०९ मा जन्मिदा, देशमा राणा शासन थियो। राणाहरू चाहन्थे जनताहरूले शिक्षा नपाउन, तर धेरै चोटिको प्रयत्नपछि देवकोटाको परिवारले उनलाई काठमाण्डौँ उपत्यकाको एकमात्र विद्यालय दरवार स्कुलमा भर्ना गरिदिए। देवकोटाले आफ्नो पहिलो कविता यही स्कुलमा लेखे, र भनिन्छ, उनले आफ्ना कविता साथीहरू र गुरुहरूलाई सुनाउने गर्दथे । धेरै पटक साथीहरूले उनले त्यस्ता उत्कृष्ट कविताहरू लेख्दा छक्क पर्दथे, तर उनका शिक्षकहरू त्यस कलिलो प्रतिभाबाट निक्कै प्रभाबित थिए।
सन् १९२५ मा देवकोटा त्रि-चन्द्र कलेजमा बिज्ञान बिषयमा भर्ना भए। बिज्ञानमा प्रमाणपत्र तहको अध्यन पुरा गरेपछि उनले मानविकी सङ्कायमा सरे। सन् १९२९मा उनले आफ्नो स्नातक तहको अध्यन पुरा गरे पछि सन् १९३१ मा छात्रबृत्ति लिएर अङ्ग्रेजीमा स्नातकोत्तर पठ्ने आशामा उनी भारतको पटना गए। अङ्ग्रेजी बिषयमा स्थान नपाएपछि उनले कानून पढे।
ग्रेटर नेपालको सपना
एक समय नेपालको सिमाना पश्चिममा काँगडा र पूर्वमा टिस्टा नदीसम्म थियो । यो सीमा बनाउनका लागि हाम्रा वीर पूर्खाहरुले रगत-पसिना एक गरेका थिए । यो कथा जति साहसिक थियो विगतमा, अहिले उति नै शर्मनाक छ । अहिले हाम्रा सीमा मिचिएका छन्, पारिबाट कमाएर फर्कँदा लुटिनु परिरहेको छ, राजनीतिक हस्तक्षेप त झनै नाङ्गो छ ।
यस्तो अवस्थामा हामी साधारण नेपालीले के गर्ने ? भएका प्रमाणहरुलाई एकत्रित पारेर जनमानसलाई सही सूचना दिने कि चूप लागेर बस्ने ? के तपाइँ हामी चूप लागेर समस्या समाधान हुन्छ ? तपाइँ हामीले गरेको एउटा सानो प्रयास पनि कतै ठूलो समाधान बनेर पो आउँछ कि ! यस्तै यस्तै आशा र सम्भावनाको पोको बनेर आएको छ, चलचित्रकर्मी मनोज पण्डितको डकुमेन्ट्री "ग्रेटर नेपाल" । जहाँ हिजो हाम्रा पूर्खाले आर्जेको देश, त्यसभित्रको दुःख र समय क्रममा हामीले गुमाएका ती ठाउँ र अहिले गुमाइरहेका स्थानहरुका बारेमा बोलिएको छ । झन्नैझन्नै उड्न लागेको विशाल प्लेन आकारको हाम्रो देश नेपाल अहिले खुम्चिएको छ । पहिले हामीले जितेका महाकाली पूर्वका अनेकन् क्षेत्र र मेची पारिको टिस्टा हामीले चाहेको खण्डमा फिर्ता पाउन सक्छौँ । किनभने अंग्रेजसँगको युद्धमा हामीले हारेका यी क्षेत्र अंग्रेजले भारत छाडेपछि स्वभाविक रुपमा ती हामीले पाउनु पर्ने थियो । जसरी मकाउ र हंगकंग चीनले फिर्ता पायो ।
टेन थाउजेन्ड बी. सी.
अंग्रेजी सिनेमा "द इण्डिपेन्डेन्स डे" र "द डे आफ्टर टुमरो" हेरिसकेका जो कोहीलाई पनि "१०,००० बीसी" शीर्षकले लोभ्याउँछ । कारण चाहिँ उही हुन्, निर्देशक- रोल्याण्ड एमिरिक ।
यी निर्देशकले इण्डिपेन्डेन्स डेमा सुदूर भविष्यको कथा गढेका थिए, जसमा पृथ्वीबासीभन्दा शक्तिशाली प्राणीले पृथ्वी (अमेरिका) मा आक्रमण गर्छन् र पूरै विश्व (अमेरिका) ध्वस्त बनाउने ध्याउन्नमा हुन्छन् । तर यहाँ जाँबाज् सेनाहरुको कुनै कमी छैन, विल स्मिथ आफ्नो ज्यान दाउमा राखेर विश्व (अमेरिका) ध्वस्त हुनबाट जोगाउँछन् । सन् १९९६ मा बनेको यो चलचित्रमा प्रयुक्त आँखै चम्काउने स्पेशल इफेक्ट, खतरनाक द्वन्द्व दृश्य र तिनमा प्रयुक्त सही मानवीय संकटले यो चलचित्रलाई साँच्चिकै दर्शनीय बनाएको थियो । तथापि केही आलोचकले यस चलचित्रलाई अमेरिका नै विश्वका रुपमा चित्रित गरेकोमा भने उति रुचाएका थिएनन् । यो आलोचनाले होला यी निर्देशकले निकै पछि अर्को चलचित्र "द आफ्टर टुमरो"मा वैश्विक समस्यालाई उजिल्याए । त्यो थियो, ग्लोबल वार्मिङ । पृथ्वीको ग्रीन हाउसमा परेको असर, त्यसले पर्यावरणमा आएको परिवर्तन र त्यो परिवर्तनले ल्याएको मानवीय संकट ।
नेपाली जुम्ला डाउनलोड गर्नुहोस्
कुनै फिड यूआरएल निर्दिष्ट गरिएन
जुम्ला क्लब नेपाल
प्रयोगकर्ताको नाम भुल्नुभयो?
नयाँ एकाउन्ट खोल्नुहोस्
तपाईलाई नेपाली जुम्ला कस्तो लाग्यो ?
वरिष्ठ छ नि !
एकदम राम्रो लाग्यो
हामीले त बुझेनौं
हामीसँग 1 जना अतिथि अनलाइन हुनुहुन्छ
सन्चालन प्रणाली (OS) : Linux d
MySQL : 5.5.59-cll
समय : 20:02
प्रतिलिपि संग्रह : निष्क्रिय
GZIP : निष्क्रिय
सदस्यहरु : 32
विषयवस्तु : 5
वेभ लिङ्कहरु : 2
विषयवस्तुको हिट : 11457
प्रतिलिपि अधिकार © 2018 Joomla Localization in Nepali. सर्वाधिकार सुरक्षित
जुमला! जीएनयू/जीपीएल इजाजतपत्र अन्तरगत जारी गरिएको एक निःशुल्क सफ्टवेयर हो